Sat, Jun 23, 2018 | 19:36:40 NST
उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मृत फेला
सर्लाही, भदौ १३ – उद्योग वाणिज्य संघ मलंगवाका अध्यक्ष रंगलाल अग्रवाल बुधबार राति मृत अवस्थामा भेटिनुभएको छ । उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालय नजिकैे सडकको खाल्डोमा ज २ प ४७२१ नम्बरको मोटरसाइकलले थिचिएको अवस्थामा राति सवा १२ बजे प्रहरीले अग्रवाललाई फेला पारेको हो ।
पाल्पामा नेपाल–अंग्रेज युद्धको झल्को
देव पचभैया/उज्यालो- पाल्पा, भदौ १३ – नेपालले अंग्रेजलाई युद्धमा पराजित गरी बिजय हासिल गरेको खुसियालीमा बिहीबार पाल्पामा बिजयउत्सब स्वरुप १ सय ९४ औं रणउज्जेश्वरी भगवतीको रथजात्रा गरेर मनाईंदैछ । कर्णेल उजिरसिंह थापाले १९७७ सालमा निर्माण गरेको रथलाई नै आजसम्म बिजय जात्राको रुपमा संचालन गरिँदै आईएको हो ।
पाटनमा अझै कृष्णको रमझम
सिल्भिया राजोपाध्याय/उज्यालो । भदौ १३ - कृष्ण अष्टमी पर्व सकिएपनि पाटनमा कृष्णपूजाको रौनक बाँकी नै छ । हरेक वर्ष कृष्णाष्टमीको भोलिपल्ट नवमीका दिन पाटनको टोलटोलमा रहेका कृष्ण मूर्तिको दर्शन र पूजाआराधना कृष्ण पूजा मनाउने चलन छ ।
लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा सर्पले टोकेको उपचार बन्द
बुटवल, भदौ १३ - सर्प दंशको उपचारको लागि चाहिने एण्टी स्नेक भेनम सकिएपछि लुम्विनी अञ्चल अस्पताल बुटवलले सर्प दंशको उपचार बिहीबारदेखि वन्द गरेको छ ।
सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने काम नगर्ने अख्तियारको निर्देशन
काठमाडौं, भदौ १२ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारी अभाव रहेको भन्दै सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने काम रोक्न विभिन्न मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ ।
फुपूले भदालाई जिउँदै पोखरीमा फालिन
कपिलवस्तु, भदौ १२ - कपिलवस्तु नगरपालिका ५ बर्गदवामा एक बालकलाई आफ्नै फुपूले जिउँदै पोखरीमा फालेकी छन् । स्थानीय सलमान गद्दीका अढाई बर्षका छोरा कल्लुलाई उनकी फुपू जमिला गद्दीले पोखरीमा फालेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सशस्त्रको गाडीको ठक्करबाट मृत्यु
नेपालगन्ज, भदौ १२ - सशस्त्र प्रहरीको औद्योगिक सुरक्षा बल नेपालगन्जको गस्ती भ्यानले ठक्कर दिँदा बुधबार नेपालगन्जमा एक साइकल यात्रीको ज्यान गएको छ भने अर्का एक घाइते भएका छन् ।
सिडिओको सरुवा माग्दै गाविस सचिव आन्दोलनमा
रोल्पा, भदौ १२ - रोल्पाका गाविस सचिवहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव सुवेदीको सरुवा नहुदाँसम्म काम नगर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पदको दुरुपयोग गरी मुद्दा दायर गरेकोले सरुवाको हुनु पर्ने गाबिस सचिवहरुको माग छ ।
सुत्केरीको ज्यान गएपछि अस्पतालमा तनाव
प्रेमनारायण आचार्य/उज्यालो । अर्घाखाँची, भदौ १२ - सुत्केरी महिलाको ज्यान गएपछि जिल्ला अस्पताल सन्धिखर्क बुधबार दिउँसो तनाब ग्रस्त बनेको छ । जिल्ला अस्पताल सन्धिखर्कमा सुत्केरी भइसकेपछि गोखुंगा ७ की सबिता पन्थीको ज्यान गएको हो ।
खानी खोलाको सुरुङमा एक युवकको मृत्यु
दोलखा, भदौ १२ - दोलखाको मार्वु गाविसमा निर्माणाधिन खानीखोला जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत ओखलढुङ्गाको खिजी चण्डेश्वरी ४ घर भएका २१ वर्षका ताराबहादुर सुनुवारको सोमवार राती ज्यान गएको छ ।
कृष्ण मन्दिरको जात्रा, थरिथरीका व्यापार (फोटो फिचर)
श्रीधर पौडेल/उज्यालो । काठमाडौं, भदौ १२ – भनिन्छ, पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार । पशुपति लगायतका अरु ठाउँमा मेला लाग्दा दर्शनार्थीको त घुईंचो हुन्छ नै । दर्शनार्थीले खोज्ने पूजाका सरसामानदेखि अरु आवश्यक सामग्री बेच्नेहरुको पनि उत्तिकै चहलपहल हुन्छ ।
उदयपुर, भदौ १२ - सशस्त्र प्रहरी वल त्रियुगा गुल्म उदयपुरमा कार्यरत एक प्रहरी जवानले बुधबार नाम नखुलेको बिष सेवन गरी आत्महत्या गरेका छन । आत्महत्या गर्नेमा त्रियुगा नगरपालिका ११ देउरीका नरेन्द्र चौधरी रहेका छन ।
कुटपिटबाट घाइते यूवाको मृत्यु
खोटाङ, भदौ १२ - खोटाङमा चार दिनअघि भएको दोहोरो झडपका क्रममा गम्भीर घाइते बनेका एक युवाको ज्यान गएको छ । महेश्वरी–३ का निर्मल राई नेतृत्वको यूवाहरुको समूहसँग भएको दोहोरो झडपका क्रममा गम्भीर घाइते बनेका महेश्वरी–४ का ३२ वर्षका महेश राईको ज्यान गएको हो ।
मकवानपुर, भदौ १२ - मकवानपुरको गाढीमा करेन्ट लागेर बुधबार दिउँसो एक बालकको ज्यान गएको छ । घर नजिकैको बिजुलीको पोलमा छुँदा करेन्ट लागेर गढी ६ मक्राञ्चुलीका प्र्रल्हाद ढकालका १३ वर्षका छोरा सविन ढकालको ज्यान गएको हो ।
मानव बेचबिखनबिरुद्ध होर्डिङबोर्ड
दमन राई/उज्यालो । खोटाङ, भदौ १२ - लुकीछिपी हुने मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले खोटाङ सदरमुकाम दिक्तेलमा जनचेतनामूलक होर्डिङबोर्ड राखिएको छ ।
कृष्णको नाममा गैरकानुनी काम !
मिलन तिमिल्सिना/उज्यालो । काठमाडौं, भदौ १२ - निकै आकर्षक र रहरलाग्दो चरो मयूर । पखेटा फिँजाएर नाच्न थाल्यो भने त सबै हेरेका हेर्‍यै हुन्छन् ।
कृष्णमन्दिरमा युवतीको घुइँचो (फोटोफिचर)
धादिङ, भदौ १२ – कृष्ण अष्टमीको अवसरमा धादिङबेसी साँघुटारमा रहेको कृष्णमन्दिरमा विहानै देखि दर्शनार्थीहरुको घुईंचो लागेको छ । धादिङबेसीकै सुगमटोलको राधाकृष्णमन्दिरमा पनि उत्तिकै भीड छ ।
कृष्ण अष्टमीमा यस्तो छ कृष्णमन्दिर (फोटो फिचर)
सिल्भिया राजोपाध्याय/उज्यालो, काठमाडौ, भदौ १२ – कृष्णाष्टमीको अवसरमा ललितपुरको मंगलबजारमा रहेको कृष्णमन्दिरमा विशेष मेला लागेको छ । हिजो सप्तमीको साँझदेखि नै भक्तजनहरुको भीड लागेको पाटनमा रातीदेखि नै भजनकीर्तन भैरहेको छ ।
आज कृष्ण अष्टमी : राष्ट्रपतिद्वारा कृष्ण मन्दिरमा पूजा आराधना
काठमाडौ, भदौ १२ – आज कृष्णाष्टमी पर्व, भगवान कृष्णको पूजा–आराधना गरी मनाईंदैछ । ललितपुरको पाटन सहित देशभरका कृष्णमन्दिरमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुईंचो लागेको छ । बुधबार दिनभर धार्मिक प्रवचन, पूजापाठ तथा श्रीकृष्णको रथयात्रा गर्ने र झुला झुलाउने गरिन्छ ।
हतियार र गोली सहित दुईजना पक्राउ
नवलपरासी, भदौ १२ – नवलपरासीमा प्रहरीले हात हतियार सहित २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गको नयाँ बेलहानीमा सवारी साधन जाँच गर्ने क्रममा ललितपुर उपमहागरपालिका ७ का ४२ वर्षका विकास महर्जन र वडा नं. १८ का ३९ वर्षकी कृति रजुन हतियार सहित पक्राउ परेका हुन् ।
बनेपामा कन्या ‘मेला’ (फोटो फिचर)
लक्ष्मी शाक्य/उज्यालो, काभ्रे बनेपाकी ६ वर्षिया अतुशाको चहलपहल अरु दिनभन्दा फरक छ । अरु दिन स्कूल जानको लागि तयार हुनमा व्यस्त रहने उनलाई आज भने राम्रा लुगा छान्नमै भ्याईनभ्याई छ ।
सुदूरपश्चिममा गौरा मनाइँदै
काठमाडौ, भदौ १२ – सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा बुधबार गौरापर्व मनाईंदैछ । मंगलबार सप्तमीका दिन व्रत बसेका विवाहित महिलाहरु गौरापुजन गर्ने ठाउँमा गई पुरुषले लगाउने जनैजस्तै धागो गौरालाई चढाउँछन् र नयाँ धागो धारण गर्छन् । यसलाई दुबधागो भनिन्छ ।
के मात्र गरेनन् कृष्णले !
काठमाडौं, भदौ १२ - भगवान कृष्णको पूजाआराधना गरी आज श्रीकृष्णाष्टमी मनाईंदैछ । भगवान कृष्णको प्रसँग आउने बित्तिकै उनले गरेका लिलाहरुको पनि चर्चा हुन्छ । धर्मशास्त्रहरुका अनुसार श्रीकृष्ण लिलाको वर्णन गरेर साध्यै छैन । धर्मशास्त्रमा उल्लेख केही लिलाहरु थाहा पाउनुअघि श्रीकृष्णको जन्मबारे चर्चा गरौं ।
युवती बलात्कारको आरोपमा कोरियन पक्राउ
हेटौंडा, भदौ ११ – हेटौडामा युवती बलात्कारको आरोपमा मंगलबार एकजना कोरियाली नागरिक पक्राउ परेका छन् । कोरियन भाषा सिकाउन भन्दै हेटौडामा बस्दै आएका ५१ बर्षिय किमकियोगलाई प्रहरीले पक्रेको हो ।
कार दुर्घटनामा कांग्रेस नेताको ज्यान गयो
पाल्पा, भदौ ११ – पाल्पामा मंगलबार भएको कार दुर्घटनामा दुई जनाको ज्यान गएको छ । बुटवलबाट पाल्पा आउदै गरेको लु १ च ४६०८ नम्बरको कार मदनपोखरा ४ ठुम्रे नजिकै दुर्घटना हुँदा नेपाली कांग्रेस गुल्मीका कोषाध्यक्ष ५५ बर्षिय हरिप्रसाद न्यौपाने र चालक २२ बर्षका इशब नेपालीको ज्यान गएको हो ।
निजी विद्यालयकी शिक्षिका आमरण अनसनमा
हेटौडा, भदौ ११ – बिभिन्न माग राख्दै मकवानपुरको निजी विद्यालयका एक शिक्षकले मंगलबार आमरण अनसन सुरु गरेकी छन् । संस्थागत बिद्यालयका शिक्षक संगठन (इष्टु)का केन्द्रीय सदस्य करुणा थापाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय परिसरमा बेलुका पाँच बजेदेखि अनसन सुरु गर्नुभएको हो ।
बोक्सी आरोप लगाउने ६ जना पक्राउ
भरत खड्का/उज्यालो, उदयपुर, भदौ ११ – उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ११ उत्तराइटोलका आमाछोरीलाई बोक्सीको आरोप लगाउने ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका सबैलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गराई अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिएको एसपी अजय भट्टराईले बताउनुभयो ।
राप्तीमा पानी खतराभन्दा माथि
नेपालगञ्ज, भदौ ११ – बाँकेमा राप्तीनदीको पानी खतराको संकेत भन्दा माथि पुगेको छ । कुसुममा रहेको जलमापन केन्द्रका अनुसार दिउँसो राप्तीमा पानीको सतह ५ दशमलव ८४ मिटर मापन गरिएको छ । राप्तीमा पानीको सतह बढेसंगै होलियाको टेपरी गाउँमा नदी पसेको छ ।
बलात्कार गर्न खोज्ने पाँच पक्राउ
नुवाकोट, भदौ ११ - किशोरीलाई बलात्कार गर्न खोजेको आरोपमा पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मंगलबार दिउँसो गोठालो गएको बेला पाँच जना यूवाहरुले पिछा गरेर बलात्कारको प्रयास गरेको किशोरीले बताएकी छिन् ।
चाडपर्वमा तडकभडक नगर्न अख्तियारको फेरि आग्रह
काठमाडौ, भदौ ११ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाजिक कार्य गर्र्दा फजुल खर्च नगर्न फेरि आग्रह गरेको छ । अख्तियारले विज्ञप्ती निकालेर सामाजिक सुधारका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक चाडपर्व, समारोह गर्दा तडक भडक तथा फजुल खर्च नगर्न आग्रह गरेको हो ।
पेटको बच्चा आफ्नै छोराको किन भनिन् आमाले ?
राधाकृष्ण डुम्रे/उज्यालो । स्याङजा, भदौ ११ - प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी महिलाले पेटको गर्भ आफ्नै छोराको हो भनेर बयान दिएपछि एकाएक तातेको स्याङ्जा अहिले केही शान्त भएको छ ।
खोलाले बगाएर युवकको ज्यान गयो
तेह्रथुम, भदौ ११ – तेह्रथुमको ताङ्मायाँ खोलाले बगाएर एक जनाको ज्यान गएको छ । सोमबार साँझ खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका श्रीजुङ ८ का ३४ बर्षिय दुर्गासिंह चोङ्बाङ मृत अवस्थामा फेला परेका प्रहरीले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिममा गौराको रौनक (फोटो फिचर)
शिबराज भट्ट/उज्यालो, धनगढी, भदौ ११ – सुदूरपश्चिममा गौराको रौनक बढ्न थालेको छ । एकताको प्रतीकको रुपमा रहेको सांस्कृतिक र लोकप्रीय चाड गौराको चहलपहलसँगै तराईका दुई जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर र ७ वटा पहाडी जिल्लाहरुका मन्दिर र शक्तिपीठहरुमा पनि रौनक छाएको छ ।
विद्यालयमा आगजनी, ४ लाखको क्षति
महोत्तरी, भदौ ११ – महोत्तरीको धिरापुर ३ मा रहेको नेपाल राष्ट्रिय सर्बोदय प्राथमिक विद्यालयमा नचिनेका मानिसको समूहले मंगलबार बिहान आगजनी गरेको छ । विहान २ बजेतिर भएको आगजनीबाट विद्यालयका महत्वपूर्ण कागजपत्रहरु जलेर नष्ट भएका छन् ।
अर्घाखाँची, भदौ ११ - अर्घाखाँचीको जलुके गाविसमा सर्पले डसेर एक महिलाको ज्यान गएको छ । जलुके गाविस वाड नम्बर ३ कामिडाँडा निवासी २३ वर्षका चन्द्री कुमालको सर्पले डसेर ज्यान गएको हो ।
संरक्षणको अभावमा रातो माछा लोप हुँदै
खोटाङ, भदौ ११ – संरक्षणको अभावमा खोटाङको बराहपोखरीमा पाइने रातो माछा लोप हुँदै गएको छ । बराहपोखरी गाविसको पोखरीमा पाइने संसारकै दुर्लभ रातो माछा संरक्षणको अभावमा लोप हुँदै गएको हो । स्थानीय वासिन्दाले माछा मार्ने गरेको र पानी हाँसले पनि खाने गरेका कारण रातो माछा हराउँदै गएको हो ।
सर्पले डसेर बालिकाको ज्यान गयो
रौतहट, भदौ ११ – रौतहटमा सर्पको टोकाइबाट एक बालिकाको ज्यान गएको छ । सरुअठा गाविस ९ का चाँद महमदको १४ वर्षीया छोरी सपनाको खातुनको विषालु सर्पको टोकाइबाट ज्यान गएको हो । सोमबार राती घरमा सुतिरहेकी सपनालाई सर्पले डसेको थियो ।
तीन सय २५ प्रधानाध्यापक अयोग्य
पर्वत, भदौ ११ – पर्वतका अधिकांश विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिक्षा नियमावली अनुसार अयोग्य भएको पाइएको छ । पर्वतका ३ सय २८ विद्यालय मध्य ३ सय २५ जना प्रधानाध्यापक शिक्षा नियमावली अनुसार अयोग्य रहेको पाइएको हो । तीनवटा विद्यालयका प्रधानाध्यापक मात्रै योग्य पाइएको छ ।
अरिंगालले टोकेर किशोरीको ज्यान गयो
सल्यान, भदौ ११ – अरिंगालले टोकेर सल्यानमा गएराती एक किशोरीको ज्यान गएको छ । एमएम एकेडेमीमा कक्षा १० मा पढ्ने १५ वर्षीया अजिता अधिकारीलाई कक्षा कोठामै अरिंगालले टोकेको थियो । अधिकारीको उपचारका क्रममा सोमबार राती ज्यान गएको जिल्ला अस्पताल सल्यानले जनाएको छ ।
एम्बुलेन्स दुर्घटनामा विरामी बालिकाको मृत्यु
उदयपुर, भदौ १० - बिरामी बोकेर जाँदै गरेको एम्बुलेन्स दुर्घटनामा घाइते भएकी एक बालिकाको उपचारका क्रममा बिराटनगरमा ज्यान गएको छ ।